महालक्ष्मी विकास बैंकको खुद नाफा ७१ प्रतिशतले बढ्यो, प्रतिसेयर आम्दानी कति ? « dainiki
६ श्रावण २०७८, बुधबार १२:१५
महालक्ष्मी विकास बैंकको खुद नाफा ७१ प्रतिशतले बढ्यो, प्रतिसेयर आम्दानी कति ?
६ साउन, काठमाडौँ । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड खुद नाफा ७१ प्रतिशतले बढेकाे छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको चौथौ त्रैमाससम्ममा बैंकले ७३ करोड २९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आवमा ४२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । यो अघिल्लो आव को तुलनामा ७१ प्रतिशतले उकालो लागेको हो ।
बैंकको गैह्र सञ्चालन आम्दानी पनि उच्च अंकले बढेको छ । अघिल्ले वर्ष ३ करोड ३८ लाख मात्र अन्य संचालन आम्दानी गरेको बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १६ करोड ४९ लाख यस्तो आम्दानी गरेको छ यो आम्दानी ३८६ प्रतिशतले बढेको हो । बैंकको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ३४ करोड २४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्रकाशित मिति: ६ श्रावण २०७८, बुधबार १२:१५
१८ साउन, काठमाडौँ । नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोनाको जोखिम कम हुँदै गएपछि सबैजसो कार्यालयले स्थलगतरूपमै सेवा
सिद्धार्थ बैंकका सीइओ शम्भुनाथ गौतमले दिए राजीनामा
१८ साउन, काठमाडौँ । सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) शम्भुनाथ गौतमले राजीनामा दिएका छन्
सिद्धार्थ बैंकको कामु सीईओको जिम्मेवारी सुन्दरप्रसाद कँडेललाई
१७ साउन, काठमाडौँ । सिद्धार्थ बैंकको कामु सीईओमा सुन्दरप्रसाद कँडेल नियुक्त भएका छन् । सिद्धार्थ